Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Eluhlaza okwesibhakabhaka Ye - I-Airbnb
Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Eluhlaza okwesibhakabhaka Ye
I-Blue Cabin iyi-palapa yendabuko, yasemaphandleni, uphahla lwesundu, amamitha angu-55 ukusuka ebhishi, ukubuka ulwandle, i-Wifi, ama-hammock, ikhishi elinakho konke, isiqandisi, amanzi ahlanziwe kanye ne-grill. Izungezwe yihlathi, imisindo oyizwayo yizinyoni kanye nokukhathazeka kolwandle. Ekamelweni lokulala (elivikelwe ngenetha lomiyane) unombhede olala abantu ababili kanye ne-futon eyodwa (eqinile), isiphephethamoya futhi iphephile. Ekamelweni lokuphumula unombhede owusofa nezinye izinketho. Inendlu yokugezela yangasese engadini izinyathelo ezimbalwa.
Izindlu ezakhiwe ngamapulangwe zihlukaniswe kahle ehlathini ukuze zibe nobumfihlo obuhle phakathi kwazo. Kunezinhlobo eziningana zezinyoni nezilwane ezincane ezifana nama-armadillo, ama-tlacuaches, amahlengethwa, nama-iguana kulabo abathanda imvelo. Indawo ikhethekile ngokuzola nokuthula, kodwa uma uzizwa sengathi “isenzo” idolobhana alikho kude kangako (imizuzu engu-12 uhamba ebhishi).
Uhamba nje imizuzu engu-10 ebhishi lapho ufika khona e-San Agust Atlanlo lapho uzothola khona izindawo zokudlela, ama-bar, uhambo lwezikebhe, abangane abavela kuwo wonke umhlaba futhi ikakhulukazi abantu abanobungane besifunda. Ngokuvamile kuphephile ukugeza lapho kodwa unake izivikeli zokuphila ngoba ngezinye izikhathi izimo ziyingozi. Imizuzu engu-20 kamuva ufika e-Mazunte ne-Turtle Museum yayo edumile, umculo nezinto eziningi ezithakazelisayo nezokuzijabulisa.
I-Zipolite Beach isemizuzwini engu-5 ukusuka lapha ngetekisi. Futhi uma ufuna ukwazi eminye imizana efana ne-Pluma Imperalgo ezintabeni, kulula. Kuhlale kukhona amaphathi emizaneni yomdabu. Empeleni, izinto eziningi ezithakazelisayo ziseduze.
Ngenxa yobumfihlo bakho, uma usuqashise indlu eyakhiwe ngamapulangwe ingeyakho futhi asingeni ngaphandle kwesimemo noma esimweni esiphuthumayo kuphela. Yingakho singenzi ukuhlanza uma indlu eyakhiwe ngamapulangwe isinabantu. Uma igesi iphela, amanzi ahlanziwe, iphepha lasendlini yangasese noma yini, sizokunikeza yona. Ngokufanayo, lapho bedinga izingubo ezihlanzekile zemibhede, amathawula, njll. Ngaphandle kwesevisi evamile, ngethiphu singabathumela, ngokwesibonelo, ukuletha okuthile okuvela esitolo.
Ngenxa yobumfihlo bakho, uma usuqashise indlu eyakhiwe ngamapulangwe ingeyakho futhi asingeni ngaphandle kwesimemo noma esimweni esiphuthumayo kuphela. Yingakho singenzi ukuhlanza…